New kulmay #hst jir #greatwesternrailway #GWR #newtrains
post A wadaago by Nigel C Williamson (@ nigelw68) on Jan 22, 2018 at 3:24am PST
Marka imaanayn gaadiidka la rail, kharashka dibadda, qayladii, wasaqowga hawada, shilalka, iyo sii kaabayaasha, iyo ciriiriga fog hoose on Tareenada badan oo isticmaalaya baabuur khaas ah.
guuxa waa saamaynta xun ee buuqa ku saabsan dadka iyo xayawaanka labadaba. Waa natiijada tooska ah ee saboolka ah qorshaynta magaalooyinka. Dhibaatooyinka iyo qayladii dib taariikhda wasakhda in qadiimiga Rome! maanta, guuxa ka baabuurta u keeni karaan waxyeelo gobolka nafsi dadka. Calaamadaha waxaa ka mid ah dhiig-karka, heer-sare stress, tinnitus, khalkhal hurdo, iyo saamaynta kale waxyeello.
tareenka waa bay'adda iyo in ay muhiim tahay. Hindiya waa in aad aragto iibka baabuurta sii kordhaysa on sannad walba. Shiinaha la saadaaliyo in ay leeyihiin 300 million baabuurta wadada by 2030. Duulista iyo safarka markab ayaa sidoo kale ku daray in ay naqaska CO2 caalamka. Waxay u muuqataa in ka mid ah oo dhan hababka gaadiidka, tareenada oo keliya ayaa ku qiiqa hoose iyo waarta mustaqbalka.
Waxaa jira farqi u dhexeeya naaftada tareenada iyo korontada tareenada. tareenada Electric dhaadheer 20-35% carbon ka yar tareen naaftada ah. tareen A waa tareenada gaar ahaan Electric bay'adda u fiican in ay ku shaqeeya by tamarta la cusboonaysiin karo iyo dalab sodcaalladoodii carbon-free. Wasakhda ka soo tareenada ee Europe doono yareeyo by dheeraad ah a 50% by 2030. Tirooyinkan waa weyn tan iyo tareenada warsan 8.5% dhaqdhaqaaqa safarka oo dhan.
#sawir #carpolution #environment
post A wadaago by Dave Wheeler (@davewheelerstudio) on Jun 23, 2016 at 3:18pm Magaadle
items Qaar ka mid ah xiisaha marka barbar tareenada in diyaarado waa in diyaarado u baahan tahay si ay u isticmaalaan lacagta la yaab leh Shidaalka duushay oo soo degtey labada. Sidoo kale, oo markii dadkii safri diyaarad, waxay u muuqdaan in ay u hesho in ay garoonka diyaaradaha baabuur by. Tani waxay ku darayaa in naqaska CO2 ay safarka. Taas ayaa ka dhigaysa qaadashada ah tareen Intercity a no-brainer deegaanka.
Waxaa jiray qaar ka mid ah horumar ugu dambeeyey, gaar ahaan loogu talagalay dadka safraya ganacsi kuwaas oo ku wargeliyay by wakiilada safarka saameynta carbon duulimaadyada ay ku. Sidoo kale, ka ah deegaanka uu leexan, waxaa aad u adag in ay gaaraan xarumaha magaalada baabuur by, halka, haddii aad tahay on tareen, aad leedahay si toos ah xarumaha iyo nawaaxigeeda helitaanka. Tani, inta badan, Waxa kale oo ka dhigan tahay in si deg-deg waa inay ku socdaalaan tareenka badan hab kasta oo kale oo.
Gebogebadii, tareenka waa bay'adda iyo habka ugu deegaanka-friendly in ay u safraan iyo sidoo kale bixin sahlanaato dadka u safraya ganacsi iyo farxad labadaba. Kororka baabuurta wadada ka dhigan tahay in ciriiriga iyo wasakhda yihiin kororka iyo tareenada waa jawaab gaadiidka in ay ilaaliyaan deegaanka ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
safarka tareenka, safarka tareenka France, safarka tareenka Hungary, safarka tareenka Italy, safarka tareenka Spain, safarka Europe
Safarka Business by tareenka, safarka tareenka, Talooyin safarka tareenka
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Meey 2021